Wararka - Ka qayb qaado Kahortagga Cudurrada Adduunka
Ku darso Kahortagga Cudurrada Adduunka
Waxaa saameeyay xaalada aduunka ee cudurka faafa ee cusub ee loo yaqaan 'coronavirus epidemic', warshadu waxay ku bilaabaneysaa waji-baarista iyo amarrada maaskaro badeecada si deg deg ah, si aan ugu dadaalno dadaalkeenna ka hortagga cudurrada faafa ee adduunka.
Tan iyo dhammaadkii 2019, Shiinaha waxaa ka dhacay cudur ballaaran oo cusub oo loo yaqaan 'coronavirus epidemic' (oo loo yaqaan 'COVID-2019'), kaas oo soo jiitay dareenka weyn ee dowladda Shiinaha iyo dadka. Covid-19 waxaa loola jeedaa oof wareenka uu sababo Novel Coronavirus 2019, astaamaheeda badanaa waxaa ka mid ah qandho, daal iyo qufac qalalan. 28 Febraayo 2020, warbixintii maalinlaha ahayd ee WHO ee ku saabsaneyd COVID-19 waxay sare ugu qaaday "aad u sareysa" heerka halista gobolka iyo adduunka, waxay la mid tahay Shiinaha, waa heerkii ugu sareeyay ee ka sareeya "hore".
11kii Maarso 2020 waqtiga maxalliga ah, Agaasimaha Guud ee WHO wuxuu shaaca ka qaaday in, iyadoo lagu saleynayo qiimeyn, WHO ay rumeysan tahay in cudurka hadda socda ee COVID-19 uu ugu yeeri karo masiibo caalami ah. Shirka Jaraa'id ee Xarunta Ka Hortagga Cudurrada ee ShangHai ayaa la xaqiijiyey: Waddooyinka gudbinta ee COVID-19 inta badan waa gudbinta tooska ah, gudbinta aerosol iyo gudbinta xiriirka. Gudbinta tooska ah waxaa loola jeedaa infekshinka ay keento neefsashada dhibcaha hindhisada, qufaca, hadalka iyo hawada neefta ee ugu dhow. Gudbinta Aerosol waxaa loola jeedaa infekshan ay leedahay aerosols nuugid ah oo ay sameeyeen dhibco isku qasan hawada. Gudbinta xiriirka ayaa loola jeedaa dhigista dhibcaha dusha sare ee walxaha, ka dib marka lala xiriiro gacmo wasakhaysan, ka dibna la taabto xuubka afka, sanka iyo indhaha, taasoo keenta infekshin. Marka xaaladda daran, dowladda Shiinaha waxay qaadatay tallaabooyin taxane ah oo ka hortagga cudurrada faafa. Laakiin isla markaa, cudurku si dhakhso leh ayuu ugu faafay adduunka oo sahayda gargaarka ayaa si deg deg ah loogu baahan yahay. Tani waxay noqotay xaalad deg deg ah oo caalami ah. Xaaladda adduunka hoosteeda, Mudane Xiuhai Wu oo ah guddoomiyaha shirkadda Besttone wuxuu abaabulay kulan deg deg ah oo deg deg ah wuxuuna qaatay go'aan muhiim ah: bilaabista cilmi baarista iyo soo saarista waji daboolida iyo qalabka ka hortagga cudurrada sida ugu dhakhsaha badan, kordhinta wax soo saarka maaskarada, xitaa gelinta marka hore. In ka yar seddex bilood habeen iyo maalin, warshada Besttone waxay soo saartay in kabadan 10 milyan oo waji ah. Waxay ka dhigeysaa awoodda wax soo saar ee ugu sareysa khadka wax soo saarka.
Cudurka faafa waa mid naxariis daran, laakiin dadku way diirran yihiin. U adeegida aduunka, 20 sano Besttone, waxaan ku soconay wadada.